Isifiso sokulandelela indawo yendawo yakho kulula ukuchaza, ngaphezu kwalokho, ngesikhathi samanje, njengoba inani lezinxushunxushunxushu kanye nokwabiwa kwezigebengu kuye kwanda kakhulu. Ungangishayela nami ngingenalutho, kodwa kubonakala sengathi ukubhekwa kwemoto kufanele kwenziwe kuphela yi-satellites, ngoba lokhu kuyindlela enkulu kakhulu yokulawula ukunyakaza. Ngokuvamile, nganquma ukwenza ucwaningo kule ndawo - uhlelo lokuqapha iSatellite, ukuze uthole ngamathemba ngokuningiliziwe.
Ama-beacons okuthiwa i-satellite, athengiswa ezitolo ezikhethekile, ukusiza ukuhlela ukulawula okugcwele phezu kwezokuthutha. I-tracker satellite Tracker Xexun TK 103, nezinye izinto ezinamakhono afanayo, ingarekhoda iphethini yokunyakaza komshini bese uyithumela njengoluhlu kwisiphakeli esikude. Ngakho-ke, le bhakoni ivumela i-dispatcher ukuba iqaphele isimiso somgwaqo sezimpawu zokulawula esinqunyiwe, futhi ithunyelwe ngekhathi elilodwa lomzuzu. Ngoba indlela yokulandelela into ekhuluma ngokuqondile ne-satellite, ukucaciswa kokudluliswa kwendawo kuphezulu kakhulu.
Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zindlela zisetshenziswa hhayi kuphela ukulawula izixhumanisi zezimoto. Ngaya ku-Xexun TK 106, kodwa nginesithakazelo ekuqapheleni amandla kwezinye izindawo. Ngokuvamile, abaculi bangasetshenziswa ukulandelela noma yiziphi izinto ezihambayo, kubandakanya abantu noma izilwane ezifuywayo. Kusukela kolwazi olutholakala enkundleni, ngabona ukuthi indlela enengqondo kakhulu yokusebenzisa la mathuba izoqapha ukuhamba kwabantu asebekhulile nezingane. Izingane ezingathandeki zingahle zixhumanise ibhonasi ye-Xexun TK 206. Ngenxa yalokho, indlela yokulandelela i-GPS isiza ukusungula imingcele ethile yento, uma uwela emigqeni opharetha kuyoyithola ngokushesha umyalezo. Ngesikhathi ngifunda leli qiniso, nganquma - kungaba kuhle ukunamathisela ugogo kumakhulukazi, okwathi ngezikhathi ezithile kufanele afune zonke izitaladi. Uvele eshiya indlu, bese ukhohlwa lapho ehlala khona, esongela izinkinga ezinkulu. Ngakho lapha kufanele ukhethe kancane. Ukuze izifuywayo zethu i-Tracker Xexun TK 201 ifanelekile.
Kodwa nokho ngicabanga-ngoba uhlelo lwe-GPS lamagumbi okuhamba endaweni yokuthutha - amathemba. Lapha sibheka, isibonelo, ukusayina kwe-GPS. Kuyini? Le alamu iphumelela kakhulu kunezinhlelo ezijwayelekile ze-alamu, ngoba ikuvumela ukuthi ubone ukuhamba kwezinto kunoma iyiphi ibanga. Amanye ama-trackers angasebenza ndawonye nesistimu yokuqalisa imoto, ukuwagwinya uma kudingekile. Isifiso sokulawula indawo yendawo yakho sinemvelo, ikakhulukazi kusukela namuhla, njengoba inani lezinxushunxushunxushu kanye nomsebenzi ononya landa kakhulu. Omunye uzokubiza ngokuthi i-paranoia, kodwa ngicabanga ukuthi ukuphathwa kwezokuthutha kufanele kwenziwe kuphela yi-satellites, ngoba lena yindlela ephezulu kakhulu yokulawula ukunyakaza. Ngamanye amazwi, nganquma ukuphenya kule ndawo - uhlelo lwe-alamu ye-GPS, ukuze wonke umuntu angathola ngamathemba.
Abaculi ababizwa ngokuthi i-satellites, abethelwe ezitolo ezikhethekile, basize ukuqinisekisa ukuhlolwa okugcwele kwemoto. I-tracker satellite Tracker Xexun TK 103, noma amanye amabhizinisi anemisebenzi efana nayo, uyakwazi ukukhumbula isimiso sokuthutha futhi uyithumele njengoluhlu kwisiphakeli esikhethekile. Ngakho-ke, i-beacon satellite ivumela i-dispatcher ukuthi ibone indlela yemoto ehamba ngezindawo zokulawula ezihleliwe, kanye nokuthunyelwa isikhathi esincane esicacile. Njengoba isakhiwo sokulandelela izinto sixhumana ngokuqondile ne-satellite, ukucaciswa kokudluliswa kwendawo kuphezulu kakhulu.
Kumele kuqashelwe ukuthi izinhlelo ezinjalo zisetshenziselwa ukuqapha ukuhamba kwezimoto. Ngangithanda i-GPS ye-Xexun TK 102-2, kodwa ngangibuza ngamathuba okuqapha kwezinye izindawo. Ngokuvamile, abaculi bangasetshenziswa ukulandelela noma yiziphi izinto ezihambayo, kufaka phakathi abantu noma izilwane. Kusukela engxoxweni engiyibonayo kwinethiwekhi, ngabona ukuthi indlela enengqondo kakhulu yokusebenzisa izinhlelo ezinjalo ukulandelela ukuhamba kwabantu abadala noma izingane. Izingane ezingathandeki zizosiza ukuxhumanisa ukulawulwa kwe-GPS kwezingane. Ngakho-ke, isimiso sokuqapha i-GPS sisiza ukusungula imingcele eqondile yento, esimweni sokuwela ngaphesheya lapho umlayezo othumele khona uzothola khona umlayezo ngokushesha. Lapho ngifunda lolu lwazi, nganquma - kungaba kuhle ukulungisa ibhonasi kumkhulu wami, ngezinye izikhathi kufanele kusetshenziswe wonke umuzi. Uvele eshiya indlu, bese engakwazi ukukhumbula ukuthi uhlalaphi, egcwele inkathazo enkulu. Ngakho-ke lapha kuyadingeka ukhethe ngokucophelela. Ama-homeboys amancane i-tracker Xexun TK 201 izokwenza.
Futhi namanje, ngiyaqiniseka ukuthi amathemba ama-GPS amaconsi emkhakheni wezimoto ayabalulekile. Ake sicabangele, isibonelo, ukusayina nge-satellite. Kuyini lokhu? Le alamu iphumelela kangcono kunezinhlelo ze-alamu zakudala, ngoba ikuvumela ukuba ulandele ukuhamba kwemoto endaweni ebanzi. Amanye amamodeli ezindawo zokugcina angasebenza ndawonye nesistimu yokuvula injini, ukuyimisa uma kudingekile.
GPS-ethungatha beacon: amathiphu wokukhetha kanye nokubuyekezwa abakhiqizi
Explay PN 955: Ukucaciswa, amabalazwe, izici
Ngaphansi kwethonya isikhathi: izinkanyezi ebusheni bakhe futhi manje
Izikhungo izivakashi eziphezulu. Nethezeka ku Iron Port: izithombe kanye nokubuyekeza
Njengoba into vintage iba ingxenye yesithombe
1948 - unyaka ngubani ubhalisele?
Indlela ukuxhuma nendlela ukukhubaza Ikhredithi trust "megaphone": isitatimende
30 nezifunda (Abashayeli), Balashikha: incazelo okuyinkimbinkimbi yokuhlala, ukubuyekezwa
Ungathola kanjani ilungelo lokuba yisakhamuzi saseRussia kumfokazi?
Johann Sebastian Bach. Biography of umqambi